I-Waterfront Cottage kwiLake Eugenia
Indlu epholileyo kwiLake Eugenia, ejikelezwe yimithi emihle yomsedare, kwaye kuphela i-5 - 10 imizuzu yokuqhuba ukusuka kwi-Eugenia Falls emangalisayo. I-cottage yethu yindawo enqabileyo kunye nendawo eqhelekileyo eneendawo ezininzi zokupaka, izakhiwo ezibini (i-cottage enkulu, kunye nendlu yeendwendwe), kunye neendwendwe zingasebenzisa i-jitterbug yethu (efana ne-kayak) kunye ne-rowingboat xa bezonwabisa. Umgangatho wamanzi eLake Eugenia ucocekile kwaye ucacile.
Le yindawo entle kakhulu kubathandi bendalo abafuna indawo epholileyo yokuphumla.
I-cottage inendawo eyaneleyo yokulala ngokukhululekileyo abantu abasi-8 (iibhedi ezi-2 eziphindwe kabini, kunye ne-2 yokukhupha iibhedi). Kukho igumbi lokuhlambela elincinci elinebhafu / ishawa (amanzi ashushu aphuma ngokukhawuleza, ke hlamba ngokukhawuleza!). Kukho i-tv encinci yebhokisi ene-dvd player kunye nomdlali we-vhs.